ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ပေ၏မေတ္တာသည်
ငါအရမ်းတွက်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်၏. ကိုယ်ပြုသမျှမှာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စီစဉ်ထားသည်, I do အရာအားလုံးသူများအတွက်အလွန်မဟာဗျူဟာကျသည်. ငါသည်တအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စေချင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သောအခါ, ကျွန်မဂရုတစိုက်အချိန်ကတိကဝတ်များနှင့် ပတ်သက်. အထင်, ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွရှိသည်မယ်လို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတလျှောက်တွင်ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်. အဘယ်သို့ငါချင့်တွက်ဘဲအရာ၌ငါ့ကြောင်လမ်းအခဲ့, Beau ငါ့ကိုကယ်တင်မယ်လို့.
ငါ့နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အတွက်, ငါသည်တခက်ခဲတဲ့ဘဝ၌ကျေးဇူးပြုခဲ့ကြ. ကအပေါင်းတို့၏အလယ်၌, ငါ့လက်ထက်၌ငါ့ကြောင်အိမ်မှာငါ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း သိ. တောက်ပတဲ့နှင့်ပိုပြီးခံသာဖြစ်ပုံရသည်. Beau အမြဲတမ်းတရားမနှင့်အတူနှစ်သိမ့်ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သူတစ်ဦး furry အဖော်ထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့ငါ့အထီးကျန်မှုစီမံခန့်ခွဲသည်. နာရီကြာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုမျက်ရည်ကျ cuddling နှင့်ကွာရှင်းပစ်ခြင်းနေစဉ်ကျနော်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အပန်းဖြေထောက်ပံ့. ရယ်မောခြင်းနှင့်ပြည့်စုံနာရီကြာကစားအစည်းအဝေးများနှင့်အတူသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုငါမဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေး. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ငြိမ်းစေလျက်နိုင်ပါသည်.
ငါသည်တအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာငါ့အမြဲတိုးပွားလာ motherly ဗီဇနှင့်အတူကူညီခဲ့သည်. ငါသည်ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏မေတ္တာကိုကျွန်မချင်သောမိခင်မြေသို့ငါအသွင်ပြောင်းကူညီနှင့်ငါ့အနာဂတ်သားသမီးတို့အဘို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိ. Beau ရဲ့မှီခိုမှုအကြှနျုပျကိုအမှန်တကယ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားသောသက်ရှိသတ္တဝါတွေပြုစုပျိုးထောင်ကူညီလိုအပ်သောတာဝန်နှင့်ယဇ်ကိုပူဇော်ရာပြသခဲ့သည်. ပြန်လာအတွက်, မိမိအခြွင်းချက်မရှိချစ်ခင်ငါ့အားနက်ရှိုင်းကိုချစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ. ဒါဟာငါဖြစ်နိုင်မှန်းသိဘယ်တော့မှတစ်ဦးမေတ္တာကိုပြသခဲ့ပြီး. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်သင်သည်မေတ္တာတရားကို၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်ကြားပေးနိုင်.
ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုရှာဖွေ၌ငါ၏တွက်ချက်အားထုတ်မှုမီချီဂန်ပြည်နယ်အနှံ့သုံးနာရီကြာကားစီးပေါ်မှာငါ့ကိုဦးဆောင်သည့်. ကယ်ဆယ်ရေးဝင်ရောက်ခြင်းအပေါ်သို့, ထို Kittens တယောက်သောသူသည်ငါ့ကိုမှညာဘက်ကိုကူးလာကြသည်, ငါ့ပေါင်ပေါ်မှာလှဲချထား, နှင့်မစွန့်မယ်လို့. ကျနော်အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပါသည်. ထို နေ့မှစ., ငါ့ကြောင်နဲ့ကျွန်မထူးခြားတဲ့နှောင်ကြိုးခဲ့ကြရသည်. Beau အလွန်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည်, လုနီးပါးခွေးတူပေမယ့်သူသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြနေသည်. နှစ်ပေါင်းများစွာကျနော့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ suitors အများစုနှင့်တွေ့ဆုံ, Beau မှန်မှန်ကန်ကန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါအထပ်ထပ်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်. ကျွန်တော်, တကယ်တော့, ယခုကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုပေးဘို့သူ့ကိုလှည့်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်တခြားသူတွေရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့အရှိန်ပြသနိုင်.
ပျက်စီးနေတဲ့အိမ်ကနေလာမယ့်ငါ့အဖေကတံခါးပိတ်-off မှာဖြစ်လာငှါငါ့ကိုဦးဆောင်တဲ့သိရပါတယ်နှင့်မဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်ရှိခြင်း. ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရွေးချယ်တဲ့အခါ, ငါကယောက်ျားဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသိ. ကျွန်မအလှည့် Beau အတွက်အလွန်မေတ္တာပြည့်ဝသောကြောင်ဖြစ်လာမှသူ့ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ပြပြီသောဂရုစိုက်တတ်တဲ့သဘာဝနှင့်ချစ်ခင်တွယ်တာ. ငါ့အပေါ်မှာမိမိအမှီခိုအားထားသူကိုအမှန်ပင်ဒီဆက်ဆံရေးအတွက်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ကျရောက်ငါ့အားပြတော်မူပြီ. Beau ငါ့အားပြသသောမေတ္တာငါ့ကိုမမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်, သူကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကျရောက်ဖြစ်လာငှါငါ့ကိုမှုတ်သွင်းပြီ. ငါ့ကြောင်အခြားသူတစ်ဦးမေတ္တာပါအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ထိုက်သည်ငါ့အားပြတော်မူပြီ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏မေတ္တာကိုအမှန်တကယ်မျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်.
the Dog Walker က